Nin direes duuliye gashan oo dayaarad rakaab ah iska dhigay inuu duuliyaheedi uu yahay! | Salaan Media
Home Articles Nin direes duuliye gashan oo dayaarad rakaab ah iska dhigay inuu duuliyaheedi...
(CNN) Nin 61 jir ah oo u dhashay wadanka faransiiska ayaa la xidhay kadib markii uu kufadhiyey kursigii duuliyaha diyaarad ay leedahay shirkada US Airways. Nikaas oo ku labisnaa direes lamid ah ka ay gashadaan duuliyaasha diyaaradaha oo calaamada Air France ku qornayd. Dhacdodan oo ka dhacday Madaarka Caalamiga ah ee magaalada Philadelphia ayaa ka warbixiyey booliiska magaladaas.
Muqaalka Philippe Jeanard
Shakhsigan oo lagu magacaabo Philippe Jernnard ayaa soo koray dayarada malintii arbacada galinkeedi dambe; waa siduu u sheegay dembi baadhaha booliiska oo lagu magacaabo Joseph Sullivan. oo ka tirsan booliska magaalad Philadelphia oo ku taala dalka maraykanka.
Isagoo Mr Sullivan ka warbixinaya ayuu yidhi ” Waxaanu ugu soo galnay Jernnard oo kurisga ka dambeeya kursiga duuliyaha dayaarada ku fadhiya, markii ay shaqaalihii diyaarada ka shakiyeen sababta oo ahayd Jernnard oo haysan cadaymo xaqiijinaya inuu diyaarada duuliyaheeda uu yahay; markaana ay ka dalbadeen inuu ka dago diyaarada intaanay dakada ka dhaqaaqin.”
Booliska ayaa xidhay Jernnard oo ku qaaday xukuno kala duwan oo ay ka tirsanyihiin been abuur iyo iskadhigid qof u adeega bulshada iyo been uu u sheegay booliska.
Sarkaal u hadlayey waaxda aminga ee fadaaraaliga ama FBIda ayaa cadayey inanay dhacdadan mid argagixso ah ku tilmaamayn lakinsee baadhitaan ku wadaan sababta keentay inuu Jernnard usuurto gasho inuu soo galo shidhka hore ee diyaarada.
Halka kala soco: http://edition.cnn.com/2013/03/22/travel/pennsylvania-pilot-impersonation/